Maxay muhiim u noqotay wax akhrinta
Started by wanleweyn, 25 May 2017
Qofkasta wuu ogyahay in wax akhrinta aad iyo aad muhiim u tahay laakiin waligaa ma is weydiisay sababta muhiim u tahay wax akhrinta hadaba qoraalkaan waxaan idinku soo gudbinaynaa 8 waxyaabood ama sababood ee muhiim u tahay in wax badan la akhriyo.
1.in aad ogaatid waxyaabo horey aadan u ogeen
Akhrinta muhiimada ay u leedahay nafsadaada ayaa ah marka hore in aad heshid akhbaar aadan ogeyn wagtiga ay dhacday iyo in aad waxbadan ka ogaatid taariikhihii horey u dhacay iyo wadamada ay dhaceen iyo sababaha keenay dhacdadaas in ay dhacdo in aad ogaatid taariikhihii hore iyo wixii maalinla dhaca intaba waxaa kuu suura gelinaayo in aadwax ka ogaatid akhrinta.
2.in nafsad ahaantaada hor mar samayso
Akhrinta waxay hormarisaa nafsadaada qofka marka uu wax akhriyo wuxuu helaayaa kalsooni fara badan oo ku aadan nafsadiisa islamarkaana suuragal ma ahan in laguu sheego waxyaabo aan jiriin ama taariikh hore o been ah waayo waaba ogtahay ama horey ayaad ogeed.
Inbadan wax akhri si aad u ogaatid waxbadan akhrinta badan waa mida ku hor marto nafsadaada islamarkaana kaa dhigto qof wax walbo og ama la socda caalamka waxa ka dhacaayo.
4.u diyaar grow waxa aad samayn doontid
Inta aadan qaadin ficilka marka hore waa in aad ka fakartaa waxa kaaga imaandona ama qofka kaa caawin lahaa ama ku hagi lahaa maanta aduunka feedback waxaa laga helaayaa dadka iyo in aad wareysatid ama la shekaysatid dadkii hore .
5.ka hel khibrad dadka kale
Marka aad wax akhrisid waxaa hubaal ah in aad wax badan ogaatid oo dhan walbo leh sida aqoonta qofka oo siyaado in uu ogaado taariikhihii hore iyo wixii la mid ah.
Xiriirka waa wadada ugu wanaagsan ee aad wax ku akhrin kartid marka aad samaynayso xiriir waxaad fahmaysaa waxbadan oo ku saabsan akhrinta xiriirka waa qaabka ugu wanaagsan ee isku xirka warka maalinlaha.
7.maskax dagan wax ku akhri
Marka aad wax akhrinayso waa muhiim ah aamuusnaan buuxda iyo jawi dagan si ay maskaxdaada u galaan waxa aad akhrinayso aamuusnaanta waxay maskaxdaada ka dhigtaa in uu cad yahay waxa aad raadinayso oo xog ah .
8.in kor loo qaado caqligaada iyo garashada
Akhrinta waxa ay kordhisaa ama kor u qaadaa caqliga qofka marka aad badiso akhrinta badan waxaa is badalaayo dhaqankaada hore hadii uu ahaa mid iska fudud wuxuu isku badalaayaa mid akhyaareed o waxaa uu qofka noqonayaa qof dagan oo runtii ah qof garaadkiisa sare.